कोकाकोलाबारे तपाईलाई थाहा नभएका १० तथ्य | Karnali Post
कोकाकोलाबारे तपाईलाई थाहा नभएका १० तथ्य
कोकाकोला नेपालमा मात्रै होइन् संसारमै सवै भन्दा बढि बिक्रि पेय पदार्थमा पर्दछ । तपाईले खाने र मन पराउने कोकाकोलाका बारेमा तपाईलाई पनि धेरै कुरा थाहा नहुन सक्दछ । यहाँ कोकाकोलाका बारेमा केही रोचक जानकारी समावेश गरिएको छ ।
१.कोक संसारकै सवै भन्दा बितरण हुने पेय पदार्थ हो । कोका विश्वका २०० वटा भन्दा बढि देशकमा बिक्री गरिन्छ । यति देश त संयुक्त राष्ट्रसंघमा पनि सदस्य छैनन् ।
२. सन १८६० मा अमेरिकी बजारमा आएको कोलकाला शुरुमा नर्भ टोनिकका रुपमा बजारमा ल्याइएको थियो । यसलाई ‘मोर्डन सिभिलाइजेसन’बाट पिडित मानिसलाई औषधीका रुपमा खुवाइन्थ्यो । त्यतिखेर धरै मानिसहरु न्युरोस्थानिया भनिने मानसिक रोगबाट पिडित थिए । यस्त रोगलाई न्युरोटिक वा साइकोसोमाटिक पनि भनिन्थ्यो। कोकाकोकाले यस्ता रोगी ठीक पार्थ्यो।
३. पहिले पहिले कोकाकोलाले अपियम र मर्फिनको लतको समेत उपचार गर्ने बताइन्थ्यो । चर्चित मनोविज्ञानका ज्ञाता सिग्मण्ड फ्रायम समेत कोकाकोलाका ठुला प्रशंसक थिए। फ्रायडले कोकाकोला खाँदा डिप्रेसन ठिक भएको र यौन क्षमता बढाएको बताएका थिए।
४.कोका कोला बजारमा आउँदा कोकाबाट ट्याबलेट, वाइन, इंजेक्सन र चुरोट बनाउने गरिन्थ्यो।
५.कोकाकोलाको ‘कोला’ कहाँ बाट आएको तपाईलाई खुल्दुली हुन सक्छ। कोला अफ्रिकामा पाइने कोला नटबाट लिइइएको हो। अफ्रिकामा सयौं वर्ष देखि मानिसहरुले प्रयोग गर्दै आएको कोला नट औषधीका रुपमा समेत चर्चित छ।
६.कोकाकोला सवै भन्दा पहिले कोला वाइनबाट बनेको हो। तर आजकल भने यो अल्कोहल फ्रि छ।
७.कोकाकोला पत्ता लगाएका जोन पेमबर्टनले कोला वाइनबाटै कोकाकोला बनाउनु कारण थियो उनको मर्फिनको लत । पछि कोका कोलाले उनको दुखाइ र रोग समेत निको पारेको थियो ।
८.कोका कोलाको विज्ञापनमा देखिने पहिलो सेलोब्रेटी थिए गायीका हिल्डा क्लार्क र ओपेरा स्टार लिलियन नोर्डिका ।
९.दोस्रो विश्वयुद्ध ताका कोका कोलाले आफूलाई ‘सोल्जर्स ड्रिंक’ अर्थात सैनिकाको पेय पदार्थको रुपमा बजारमा ल्याएको थियो ।
१०. आजकल हामिले क्रिसमसको समयमा बढि देख्ने सन्ताक्लजको आकार र स्वरुपको निर्माता पनि कोकाकोला नै हो । सन १९३० मा कोकाकोलाले गरेको विज्ञापनमा सन्ता क्लज देखाइएको थियो। आजकल सोही स्वरुपको सन्ताक्लजलाई संसारभर अपनाइएको छ ।
Previous articleचलचित्र क्षेत्रको विकासका लागि सहकार्य आवश्यकः मन्त्री गुरुङ
Next articleखुर्सानीको अचम्मको गुण, जसले जोगाउँछ तपाईंको ज्यान